ကလေးဆေးရုံတွေကို …နာမည်မဖော်ဘဲ…. နှစ်ပေါင်းများစွာငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ ..ကီးနူးရီးဗ်စ် – ရွှေအလင်း
ကလေးဆေးရုံတွေကို …နာမည်မဖော်ဘဲ…. နှစ်ပေါင်းများစွာငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ ..ကီးနူးရီးဗ်စ်
ဝင်ေ ငွကောင်းပြီး နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်ထဲမှာ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ရှိပြီး အလှူအတန်း ရက်ရောတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လူသိအောင်တစ်မျိုး မသိအောင်တစ်မျိုး လှူဒါန်းကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အဲ ဒီ ထဲမှာ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် ဟောလိဝုဒ်မင်းသားကြီး ကီးနူးရီးဗ်စ် (Keanu Reeves) လည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါပဲ။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ရီးဗ်စ်ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ John Wick3ရုပ်ရှင်ကို ရုံတင်ပြသနေပြီး ပွဲဦးထွက်မှာ တစ်ပတ်စာဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ဇာတ်လမ်းအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
ရီး ဗ်စ် ဟာ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပေမဲ့ ပကာသနမဖက်ဘဲ အနေအထိုင် ရိုးရှင်းလွန်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်ရထားစီးနင်းချိန်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် သူထိုင်ခုံဖယ်ပေးခဲ့ ဖူးသူ ရီးဗ်စ်ဟာ ကမ်းခြေမှာ ဆစ်ဒဝှစ်ခ်ျစားရင်း လမ်းပေါ်ကအိမ်ရာမဲ့တစ်ယောက်နဲ့လည်း စကားလက်ဆုံ ကျချင်လည်း ကျနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ရီးဗ်စ်ဟာ ကလေးဆေးရုံတစ်ခု အတွက် လူမသိအောင် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတာလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပါပြီ။
ရီး ဗ်စ် ဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက သူ့ပုံခုံးပေါ်မှာ တာဝန်အများကြီးကို ထမ်းရင်း ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အသက် ၃ နှစ်အရွယ်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူထောင်ကျသွားတာကြောင့် အဲဒီအချိန်ကစလို့ ရီးဗ်စ် တစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ ပထွေးပေါင်းများစွာနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် သူ့မှာ dyslexia လို့ခေါ်တဲ့ စာဖတ်ခက်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုး ရှိနေတာကြောင့် ကျောင်းတက်ရတာ ခက်ခဲခဲ့ပြီး ကျောင်းပေါင်းများစွာကိုလည်း ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ရီး ဗ်စ် ဟာ သူ့ရောဂါကြောင့် စာပေဘက်မှာ အားနည်းခဲ့ပေမဲ့ အားကစားမှာထူးချွန်ပြီး ရေခဲဟော်ကီကစားခြင်း ကို နှစ်သက်ခုံခမင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေခဲဟော်ကီအားကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ဆန္ဒရှိပေမဲ့ ကစားရင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် အခုလို သရုပ်ဆောင်လိုင်းဘက် ရောက်ရှိပြီး မင်းသားဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ရီးဗ်စ်ရဲ့ မိသားစုကံမကောင်းမှုဟာ ဒီနေရာမှာတင် ရပ်မသွားပါဘူး။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ နှစ်အတော်ကြာတွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာ ဇနီးဖြစ်သူက ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ပေမဲ့ လရင့်ချိန်မှာ ကလေးပျက်ကျ သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအဖြစ်ပျက်ပြီး ရက်သတ္တအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူဟာ ကားမတော်တဆမှုနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရီးဗ်စ်တစ်ယောက် အဲဒီအချိန်ကစလို့ နောက် အိမ်ထောင်ထပ်မပြုခဲ့တာ အခုချိန်ထိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရီး ဗ်စ် တည်ထောင်ထားတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့ဟာ ကင်ဆာသုတေသနအတွက် လှူဒါန်းခဲ့သလို ကလေးဆေးရုံနဲ့ ကလေးတွေအတွက်လည်း လှူဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ရီးဗ်စ်က “ကျွန်တော် ဒီ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းကို လုပ်နေတာ ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ကလေးဆေးရုံတွေနဲ့ ကင်ဆာသုတေသနအတွက် ကူညီပေးနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့်နာမည်ကို တံဆပ်မကပ်ချင်ပါဘူး။ ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ပဲ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” လို့ ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁ ၉ ၈ ၄ ခုနှစ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲ စတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ရီးဗ်စ်ဟာ Bill and Ted ဇာတ်လမ်းတွေ၊ Point Break, Speed, John Wick ဇာတ်လမ်းတွေ၊ Constantine နဲ့ The Matrix ဇာတ်လမ်းတွေအပါအဝင် နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ရီးဗ်စ်ဟာ သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုလည်း အမြဲတမ်းကျွေးမွေးဧည့်ခံလေ့ရှိတဲ့ ရက်ရောသဘောကောင်းသူကြီး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Ref; Good Times, Wikipedia
ဝငျေ ငှကောငျးပွီး နာမညျကြျောကွားတဲ့ နိုငျငံတကာအနုပညာရှငျထဲမှာ ပရဟိတစိတျဓာတျရှိပွီး အလှူအတနျး ရကျရောတဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ လူသိအောငျတဈမြိုး မသိအောငျတဈမြိုး လှူဒါနျးကွတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။
အဲ ဒီ ထဲမှာ အသကျ ၅၄ နှဈအရှယျ ဟောလိဝုဒျမငျးသားကွီး ကီးနူးရီးဗျဈ (Keanu Reeves) လညျး တဈယောကျအပါအဝငျပါပဲ။ အခုလကျရှိအခြိနျမှာ ရီးဗျဈခေါငျးဆောငျပါဝငျထားတဲ့ John Wick3ရုပျရှငျကို ရုံတငျပွသနပွေီး ပှဲဦးထှကျမှာ တဈပတျစာဝငျငှအေကောငျးဆုံး ဇာတျလမျးအဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။
ရီး ဗျဈ ဟာ ဝငျငှကေောငျးတဲ့ နာမညျကြျောမငျးသားတဈလကျဖွဈပမေဲ့ ပကာသနမဖကျဘဲ အနအေထိုငျ ရိုးရှငျးလှနျးသူ ဖွဈပါတယျ။ မွအေောကျရထားစီးနငျးခြိနျမှာ အမြိုးသမီးတဈယောကျအတှကျ သူထိုငျခုံဖယျပေးခဲ့ ဖူးသူ ရီးဗျဈဟာ ကမျးခွမှော ဆဈဒဝှဈချြစားရငျး လမျးပျေါကအိမျရာမဲ့တဈယောကျနဲ့လညျး စကားလကျဆုံ ကခြငျြလညျး ကနြတေတျသူဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ပွငျ ပရဟိတစိတျဓာတျရှိတဲ့ ရီးဗျဈဟာ ကလေးဆေးရုံတဈခု အတှကျ လူမသိအောငျ ငှကွေေးထောကျပံ့ပေးနတောလညျး နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာပါပွီ။
ရီး ဗျဈ ဟာ ငယျရှယျစဉျအခါက သူ့ပုံခုံးပျေါမှာ တာဝနျအမြားကွီးကို ထမျးရငျး ဘဝကိုလြှောကျလှမျးခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ သူ့အသကျ ၃ နှဈအရှယျမှာ ဖခငျဖွဈသူထောငျကသြှားတာကွောငျ့ အဲဒီအခြိနျကစလို့ ရီးဗျဈ တဈယောကျ မိခငျဖွဈသူနဲ့အတူ ပထှေးပေါငျးမြားစှာနဲ့ နထေိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ဒါ့ပွငျ သူ့မှာ dyslexia လို့ချေါတဲ့ စာဖတျခကျတဲ့ရောဂါတဈမြိုး ရှိနတောကွောငျ့ ကြောငျးတကျရတာ ခကျခဲခဲ့ပွီး ကြောငျးပေါငျးမြားစှာကိုလညျး ပွောငျးရှခေဲ့ရဖူးပါတယျ။
ရီး ဗျဈ ဟာ သူ့ရောဂါကွောငျ့ စာပဘေကျမှာ အားနညျးခဲ့ပမေဲ့ အားကစားမှာထူးခြှနျပွီး ရခေဲဟျောကီကစားခွငျး ကို နှဈသကျခုံခမငျသူ ဖွဈပါတယျ။ ပရျောဖကျရှငျနယျ ရခေဲဟျောကီအားကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ ဆန်ဒရှိပမေဲ့ ကစားရငျး ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဒဏျရာရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အခုလို သရုပျဆောငျလိုငျးဘကျ ရောကျရှိပွီး မငျးသားဖွဈလာခဲ့တာပါ။
ရီးဗျဈရဲ့ မိသားစုကံမကောငျးမှုဟာ ဒီနရောမှာတငျ ရပျမသှားပါဘူး။ ၁၉၉၈ ခုနှဈမှာ နှဈအတျောကွာတှဲခဲ့တဲ့ ခဈြသူနဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး တဈနှဈကြျောအကွာမှာ ဇနီးဖွဈသူက ကိုယျဝနျရခဲ့ပမေဲ့ လရငျ့ခြိနျမှာ ကလေးပကျြကြ သှားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအဖွဈပကျြပွီး ရကျသတ်တအနညျးငယျအကွာမှာတော့ စိတျကဝြဒေနာခံစားနရေတဲ့ ဇနီးဖွဈသူဟာ ကားမတျောတဆမှုနဲ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။ ရီးဗျဈတဈယောကျ အဲဒီအခြိနျကစလို့ နောကျ အိမျထောငျထပျမပွုခဲ့တာ အခုခြိနျထိပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရီး ဗျဈ တညျထောငျထားတဲ့ ပရဟိတအဖှဲ့ဟာ ကငျဆာသုတသေနအတှကျ လှူဒါနျးခဲ့သလို ကလေးဆေးရုံနဲ့ ကလေးတှအေတှကျလညျး လှူဒါနျးလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျလို့ ရီးဗျဈက “ကြှနျတျော ဒီ ပရဟိတဖောငျဒေးရှငျးကို လုပျနတော ငါးနှဈခွောကျနှဈလောကျ ရှိပါပွီ။ ကလေးဆေးရုံတှနေဲ့ ကငျဆာသုတသေနအတှကျ ကူညီပေးနပေါတယျ။ အဲဒီအတှကျ ကြှနျတေျာ့နာမညျကို တံဆပျမကပျခငျြပါဘူး။ ဖောငျဒေးရှငျးအနနေဲ့ပဲ လုပျဆောငျသှားမှာပါ” လို့ ထုတျပွောခဲ့ပါတယျ။
၁ ၉ ၈ ၄ ခုနှဈကတညျးက အနုပညာလောကထဲ စတငျရောကျရှိခဲ့တဲ့ ရီးဗျဈဟာ Bill and Ted ဇာတျလမျးတှေ၊ Point Break, Speed, John Wick ဇာတျလမျးတှေ၊ Constantine နဲ့ The Matrix ဇာတျလမျးတှအေပါအဝငျ နာမညျကြျော ရုပျရှငျဇာတျလမျးမြားစှာမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
ရီးဗျဈဟာ သူနဲ့အတူအလုပျလုပျတဲ့ သူတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေိုလညျး အမွဲတမျးကြှေးမှေးဧညျ့ခံလရှေိ့တဲ့ ရကျရောသဘောကောငျးသူကွီး လညျး ဖွဈပါတယျ။
” တေးရေး ဝေကြီးရေးသားထားပြီး ကြည့်ရှုရတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေပါ မျက်ရည်ဝဲ စေခဲတဲ့ ရတနာမိုင်ရဲ့ သီချင်းအသစ် “
လပေါ်ကို လူတွေ ဘာကြောင့်ထပ်မသွားတော့တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း
ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မှာ ကလေးငယ်တစ်ဦး မောင်းလာတဲ့ ကားကြောင့် ကား ၃ စီး...
ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးကို.. ကျည်မျိုးစံ အတောင့် ၆၀၀ ကျော်နဲ့အတူ ..တာချီလိတ်မှာ...
“ငါ့ကို ပြန်ပို့မယ်ထင်ပြီး …ငါလိုက်လာတာ ငါကအိမ်ကို…...